Otú Pelageya si buru ibu - ihe oriri sitere na Pelagia maka umengwụ kacha mma na buckwheat
Kedu ka Pelagia si efu - ụzọ dị irè isi kwụpụ si na kpakpando
Onye a ma ama bụ Pelagia na oge a na-egosi "Voice" juru ndị na-ege ntị anya na ya. Ruo obere oge, ọ na-enwe obi ụtọ iji tufuo 10 n'arọ ma nke a mere ka ndị Russia mara mma karị. N'ihi na ị na-ejide uwe, onye ọhụụ na nke a na-ahụ anya bịara bụrụ nke a na-ahụ anya, na uche nke ajụjụ ndị ogbi - olee otú o si tụfuo ibu?
Kedu oge ole Pelagia ji buru ibu?
Maka oge dị mkpirikpi n'agbata égbè nke ngosi ahụ, onye na-agụ egwú kwụsịrị ikuku na TV. Ma, na ọnwa 4-6, a hụrụ nwa agbọghọ ahụ na ihe ọhụrụ dị egwu. Ọtụtụ na-arụ ụka na ọ gaghị ekwe omume ịmalite ngwa ngwa ngwa ngwa n'emeghị ahụ ahụ ahụ, n'ihi na kpakpando ndị na-egosi ahịa na-enwe oge siri ike, ọ na-esi ike itinye aka na ọzụzụ na nri kwesịrị ekwesị. Ịhapụ Pelagia adịghị elekwasị anya na nyocha banyere onwe ya ma na-aga n'ihu na onye ọhụụ ya.
A na-enye ezigbo onye na-agụ egwú nri. Site na nwata o nwere akwukwo maka izu oke na ihe dika mgbe o na-agbaso ya. Etu Pelageya abawo ugbua ugbu a, otutu ndi mmadu nwere mmasị, n'ihi na tupu a mata ya dika onye ocha. Ihe ọ na-eme n'oge gara aga na-agakarị na kilogram 60, ọ gaghị enwe ike ịbịaru akwa uwe kwesịrị ekwesị, ma nwee ike ịgbanwe ihe niile.
Na-ejidesi ya ike, Pelagia, onye dị elu n'oge ahụ bụ 55 kilogram na 163 centimeters, kpebiri na ọ gaghị akwụsị ebe ahụ. Ụbọchị iri abụọ na otu ọnwa, ọ na-azụ ọzụzụ na nkwonkwo, dịka otu e si kee ya. Nwatakịrị nwanyị ahụ malitere ilekwu anya mgbe ọ kwụsịrị ibu ma wepụ data ya.
Olee otú Pelagia si gbasaa?
Nye ọtụtụ ụmụ nwanyị, ajụjụ a bụ otú Pelageya si buru ibu ma onye ọbụ abụ na-ekwu na n'ihi na ọ dị mma ọ ga-achọ ụzọ dị irè. N'ọnwa abụọ mbụ, ọ na-etinye aka na ọchịchị siri ike, emesị gbanwee n'ọnọdụ dị ala karị. Na mgbakwunye na ọzụzụ ọrụ, nri Pelagia gụnyere iwu ndị a:
ịjụ ntụ ọka na ụtọ;
oriri na-arịwanye elu nke mmiri ọṅụṅụ;
ịjụ iri nri mgbe 19.00;
jiri dị ka o kwere mee buckwheat porridge.
Ejiri ụfọdụ ntakịrị ihe ndị na-eme ka ụda ọnwụ dabaa nke a. Pelageya malitere ileta ụlọ ịsa ahụ mgbe mgbe. Nke a abụghị naanị agbaze abụba, kamakwa ọ dị mma ka ọnụọgụ ahụ. Ezigbo nkuzi ghọrọ ezi enyi nke nwa agbọghọ ahụ, n'ihi na ọ na-agbanye ụda ma kpochapụ nsogbu ndị ahụ na, nke kachasị mkpa, ọnọdụ obi a. Naanị inwe okwukwe na onwe gị na ịmalite ịmalite ndụ, ihe mgbaru ọsọ nke ịla n'iyi ga-emezu.
Nri sitere na Pelagia maka umengwụ
Nke ahụ na ihe onye na-agụ egwú mere ka ọ ghara ịdị arọ, na-emetụta ihe omume ntụrụndụ ya nke ukwuu. Ugbu a, ọ na-enwe obi ụtọ ịme usoro ihe oriri na ọzụzụ, ma maka ụzọ siri ike, na maka ndị umengwụ. Ụzọ nke abụọ nwere mmasị n'ọtụtụ ndị, n'ihi na n'oge ọgba aghara kwa ụbọchị, ọ bụ naanị oge ole na ole ka a ga-ahapụ onwe ha. Ndị nne na nna na ndị nne na-eto eto na-eme nhọrọ a. Ihe oriri na-atọ ụtọ nke Pelagia , nke menu nke mejupụtara ụdị efere ndị a:
buckwheat groats na-enweghị mmanụ (ụtụtụ);
salad akwukwo nri na mmanu mmanu n'anumanu ma obu oke ohia, anu oku adighi ihe kariri abuo abuo (nri ehihie);
buckwheat na-enweghị mmanụ, ruo 200 grams, ị nwere ike ịnweta akwụkwọ nri (nri abalị).
Ime nri maka otu izu kwesịrị ilekwasị anya na buckwheat porridge . Ugboro abụọ n'ụbọchị, jiri ya na ole na ole, na-enweghị mmanụ. Na ụbọchị ndị ọzọ, ị nwere ike dochie ya na ihe oriri na azụ ma ọ bụ azụ, na-atụ ihe karịrị 200 grams. Jide n'aka na ị ga-eri nri ikpeazụ ruo asaa nke mgbede. O b ur u na i nwere nd i na-ar u or u, ma i ga-alakpu ala n'etiti etiti abali, i kwes ir i igbal i ka i ghara iri nri 4 tupu i hie.
Dika Akwukwo ndi ozo na buckwheat
Ihe oriri buckwheat na-ewu ewu ma na-ewu ewu na-ewu ewu, n'ihi na ọ na-eweta ihe a na-ahụ anya, mana, dịka ndụmọdụ nke ndị dọkịta, ị nweghị ike ịnọdụ ala ruo ogologo oge karịa otu izu. Onye na-abụ abụ ahụghị ahụ ya ahụ ma tinye ya na nri ndị ọzọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị arọ karịa. Diet Pelagei na buckwheat, ihe nke amalitere itinye anụ na anụ ndị na-eri nri anaghị efunahụ ya, ma na-etinye aka na ụda ọnwụ. N'ihi ya, nwatakịrị ahụ nwere ike ijide ya ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa isii.
Pelageya n'ihu na mgbe ọ na-efu
Nri maka ụkọ afọ ojuju maka 10 n'arọ n'izu
Nri Pelmeni maka ihe nfe
Kedu ihe dị mma maka ịdị arọ - PP ma ọ bụ BỤ?
Kedu ka Marina Afrikantova si efu arọ?
Nri nri Ducane - nkebi
Kedu ihe bara uru maka atịchok Jerusalem?
Kedu ka ị ga-esi tụfuo na ụbọchị 4?
Kedu ka esi egbutu 1 n'arọ maka ụbọchị 1?
Nzuzo nke ịla n'iyi site n'aka Kelly Osbourne
Nri maka ụbọchị abụọ
Mmega ahụ na ogwe ndị na-enweghị ihe ọ bụla maka ndị mbido
Gịnị ka oké osimiri ahụ na-atụ banyere ya?
Pasent anụ ahụ
Onyinye na ihe ịchọ mma dị oké ọnụ ahịa
Onye na-eto eto Sigourney Weaver
Ihe omimi nke agba egwu maka idi elu
Ọkụ kachasị mma maka ịdị arọ
Ule eji eme ihe n'ememe ndi Krismas nke Stella McCartney
Ọrịa nke pancreas
Achịcha na Ụgha - Ezi ntụziaka
Tomato na batter cheese
Ngwọta Ọrịa nke Ụmụaka